ယောင်းကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေးမယ့် သီချင်း (၆) ပုဒ် - For her Myanmar
FUN, Relationships>Letters From the Heart>Motivation
စိတ်ဓာတ်ကျနေပြီလား ဒီသီချင်းတွေကို နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ
ယောင်းတို့ရေ … ယောင်းတို့ကော ဖြစ်လားတော့မသိဘူး…တစ်ခါတလေ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မယ်မယ်ရရမရှိဘဲ ဘာမှမလုပ်ချင်မကိုင်ချင်လောက်အောင် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေတာမျိုးလေ။ Stella ကတော့ အဲ့လိုအချိန်တွေဆိုရင် စိတ်ကို တက်ကြွစေတဲ့ သီချင်းတွေပဲ Playlist လုပ်ပြီး နားထောင်တော့တာပဲ။ ဒီတော့ ယောင်းတို့ကို Stella နားထောင်နေကျ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးတဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတွေကို ပြောပြပေးမယ်။
(၁) Stronger – Kelly Clarkson
“Stronger” ဆိုတဲ့ ဒီသီချင်းက ယောင်းဘဝမှာ အခက်အခဲတွေကြုံလာရင် ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ခွန်အားတွေပေးမယ့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ သီချင်းစာသားကတော့ “What doesn’t kill you makes you stronger” တဲ့။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “အခက်အခဲတွေကြုံလာရပြီးရင် ပိုသန်မာလာတတ်ပါတယ်” တဲ့။
(၂) Run The World – Beyonce
R & B ဂီတလောကရဲ့ ဘုရင်မလို့တောင် တင်စားကြတဲ့ Beyonce ရဲ့ “Run The World” ကတော့ အမျိုးသမီးတွေကို စိတ်ဓာတ်ကျနေတိုင်း နားထောင်ရမယ့် သီချင်းပါပဲ။ အမျိုးသမီးတွေက ထက်မြက်ကြောင်း ရဲရင့်ကြောင်းတွေကို Beyonce က “Who run the world ? Girls” လို့ အားပါပါသီဆိုထားတာမို့ ယောင်းရဲ့ playlist ထဲ ထည့်လိုက်တော့နော်။
(၃) Roar – Katy Perry
ဘဝမှာ ရှုံးနိမ့်နေပြီလို့ ခံစားရရင် “Roar” ကို နားထောင်ပါ။ Katy Perry ရဲ့ “You held me down, but I got up” ဆိုတဲ့သီချင်းစာသားကိုက “မင်း ငါ့ကို အလဲထိုးပေမဲ့ ငါက ပြန်ထလာနိုင်တယ်” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတာကြောင့် ဒီသီချင်းနားထောင်ပြီးရင် ကြိုးစားချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါက်လာမှာပါ။
(၄) We Are The Champions – Queen
ဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစုကတောင် စွဲစွဲလမ်းလမ်းအားပေးခဲ့ရတဲ့ Queen အဖွဲ့ရဲ့ “We Are The Champion” သီချင်းက ဘယ်အချိန်မဆို နံပါတ်တစ် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားအပေးဆုံး သီချင်းပါပဲ။ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ် ငါတို့က ချန်ပီယံတွေချည်းပဲ ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားတွေနဲ့ ဒီသီချင်းကတော့ ယောင်းကို ကြက်သီးဖြန်းဖြန်းထစေတဲ့အထိ စိတ်အားတက်ကြွစေဖို့ အာမခံပါတယ်။
(၅) Not Afraid – Eminem
“Not Afraid” ကတော့ Rap လောကရဲ့ အရှင်သခင်လို့ လူတွေပြောကြတဲ့ Eminem ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ Eminem ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ချိုချိုသာသာစကားလုံးတွေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ကျကျ ထိထိမိမိစာသားတွေနဲ့ သီဆိုထားတာဆိုတော့ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ခွန်အားပေးနေသလို ခံစားရစေမယ့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
(၆) Broken Arrows – Avicii
“တစ်ခါတလေမှာ ရှုံးနိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ကြိုးစားဖို့ နောက်မကျသေးပါဘူး” ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားတွေနဲ့ “Broken Arrows” က Avicii ရဲ့ ဂန္တဝင်သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ယောင်းကို စိတ်အားထက်သန်စေမှာမို့ နားထောင်ဖြစ်အောင် နားထောင်ကြည့်နော်။
ကဲ … ဒီသီချင်းတွေကတော့ Stella စိတ်ဓာတ်ကျတိုင်း နားထောင်နေကျ သီချင်းကောင်းလေးတွေပါ။ သီချင်းတွေက စိတ်ကို သက်ရောက်မှုအများကြီးရှိပါတယ်နော်။ ယောင်းတို့ကော စိတ်ဓာတ်ကျရင် ဘယ်လိုသီချင်းတွေ နားထောင်ကြလဲ ? Stella ကို ပြောပြပေးခဲ့ကြဦးနော်။
စိတျဓာတျကနြပွေီလား ဒီသီခငျြးတှကေို နားထောငျကွညျ့လိုကျပါ
ယောငျးတို့ရေ … ယောငျးတို့ကော ဖွဈလားတော့မသိဘူး…တဈခါတလေ ဘာအကွောငျးပွခကျြမှ မယျမယျရရမရှိဘဲ ဘာမှမလုပျခငျြမကိုငျခငျြလောကျအောငျ စိတျပကျြလကျပကျြဖွဈနတောမြိုးလေ။ Stella ကတော့ အဲ့လိုအခြိနျတှဆေိုရငျ စိတျကို တကျကွှစတေဲ့ သီခငျြးတှပေဲ Playlist လုပျပွီး နားထောငျတော့တာပဲ။ ဒီတော့ ယောငျးတို့ကို Stella နားထောငျနကြေ စိတျဓာတျခှနျအားပေးတဲ့ သီခငျြးကောငျးလေးတှကေို ပွောပွပေးမယျ။
“Stronger” ဆိုတဲ့ ဒီသီခငျြးက ယောငျးဘဝမှာ အခကျအခဲတှကွေုံလာရငျ ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ရငျဆိုငျနိုငျဖို့ ခှနျအားတှပေေးမယျ့ သီခငျြးတဈပုဒျပါ။ သီခငျြးစာသားကတော့ “What doesn’t kill you makes you stronger” တဲ့။ အဓိပ်ပါယျကတော့ “အခကျအခဲတှကွေုံလာရပွီးရငျ ပိုသနျမာလာတတျပါတယျ” တဲ့။
R & B ဂီတလောကရဲ့ ဘုရငျမလို့တောငျ တငျစားကွတဲ့ Beyonce ရဲ့ “Run The World” ကတော့ အမြိုးသမီးတှကေို စိတျဓာတျကနြတေိုငျး နားထောငျရမယျ့ သီခငျြးပါပဲ။ အမြိုးသမီးတှကေ ထကျမွကျကွောငျး ရဲရငျ့ကွောငျးတှကေို Beyonce က “Who run the world ? Girls” လို့ အားပါပါသီဆိုထားတာမို့ ယောငျးရဲ့ playlist ထဲ ထညျ့လိုကျတော့နျော။
ဘဝမှာ ရှုံးနိမျ့နပွေီလို့ ခံစားရရငျ “Roar” ကို နားထောငျပါ။ Katy Perry ရဲ့ “You held me down, but I got up” ဆိုတဲ့သီခငျြးစာသားကိုက “မငျး ငါ့ကို အလဲထိုးပမေဲ့ ငါက ပွနျထလာနိုငျတယျ” လို့ အဓိပ်ပါယျရတာကွောငျ့ ဒီသီခငျြးနားထောငျပွီးရငျ ကွိုးစားခငျြစိတျတှေ တဖှားဖှားပေါကျလာမှာပါ။
ဗွိတိနျတျောဝငျမိသားစုကတောငျ စှဲစှဲလမျးလမျးအားပေးခဲ့ရတဲ့ Queen အဖှဲ့ရဲ့ “We Are The Champion” သီခငျြးက ဘယျအခြိနျမဆို နံပါတျတဈ စိတျဓာတျခှနျအားအပေးဆုံး သီခငျြးပါပဲ။ နောကျဆုံးအခြိနျထိ တိုကျပှဲဝငျသှားမယျ ငါတို့က ခနျြပီယံတှခေညျြးပဲ ဆိုတဲ့ သီခငျြးစာသားတှနေဲ့ ဒီသီခငျြးကတော့ ယောငျးကို ကွကျသီးဖွနျးဖွနျးထစတေဲ့အထိ စိတျအားတကျကွှစဖေို့ အာမခံပါတယျ။
“Not Afraid” ကတော့ Rap လောကရဲ့ အရှငျသခငျလို့ လူတှပွေောကွတဲ့ Eminem ရဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျပါ။ Eminem ရဲ့ ထုံးစံအတိုငျး ခြိုခြိုသာသာစကားလုံးတှနေဲ့ မဟုတျဘဲ လကျတှကေ့ကြ ထိထိမိမိစာသားတှနေဲ့ သီဆိုထားတာဆိုတော့ တှနျးတှနျးတိုကျတိုကျခှနျအားပေးနသေလို ခံစားရစမေယျ့ သီခငျြးတဈပုဒျပါပဲ။
“တဈခါတလမှော ရှုံးနိမျ့မယျ ဒါပမေဲ့ကွိုးစားဖို့ နောကျမကသြေးပါဘူး” ဆိုတဲ့ သီခငျြးစာသားတှနေဲ့ “Broken Arrows” က Avicii ရဲ့ ဂန်တဝငျသီခငျြးတဈပုဒျပါ။ ဘယျအခြိနျဖွဈဖွဈ ယောငျးကို စိတျအားထကျသနျစမှောမို့ နားထောငျဖွဈအောငျ နားထောငျကွညျ့နျော။
ကဲ … ဒီသီခငျြးတှကေတော့ Stella စိတျဓာတျကတြိုငျး နားထောငျနကြေ သီခငျြးကောငျးလေးတှပေါ။ သီခငျြးတှကေ စိတျကို သကျရောကျမှုအမြားကွီးရှိပါတယျနျော။ ယောငျးတို့ကော စိတျဓာတျကရြငျ ဘယျလိုသီခငျြးတှေ နားထောငျကွလဲ ? Stella ကို ပွောပွပေးခဲ့ကွဦးနျော။
Tags: Album, Artist, inspiration, Motivation, Music, Song